I-Italian usapho kufutshane Venice, Italy, ujonge kuba kuyo kubekho inkqubela okanye boy ngesingesi ukunceda thina kunye zethu boys - IVIDIYO INCOKO - EWE!
Ndinguye Simone kwaye umyeni wam ngu Gaetano, sisebenzisa kunye young kwaye funny (ndicinga) kwaye ndinesibini beautiful boys, Michele kwaye Nicola kwaye ubudala okktKengoko ukwamkela coup. Mna umsebenzi kwi supermarket njengoko komncedisi kwi-store kananjalo kwi bar, umyeni wam kwi aviation. Sinazo i-cat (Diego), kwaye omkhulu omnyama cat igcina i-puppy ngokuba Sebastian. Sino ezininzi dibanisa impressions ekusebenzeni iingubo, abathe njengobawo usapho kwaye yithi rhoqo kuza ndwendwela kwethu. Thina cinga ngokwethu a sithande, esebenzayo kwaye andwebileyo usapho, kwaye bethu ababini boys ngokuqinisekileyo uya kuyigcina phezulu kunye nathi, mna isithembiso uza zange abe okruqukileyo. Kokuqwalasela ukuba umele athabathe kwabo seriously kwaye siphathe kwabo njengaye nawuphi na omnye umsebenzi, kodwa kanjalo cinga ngabo njengoko a ubomi amava apho unako kuhlangana abantu abatsha, mhlawumbi ukufunda omtsha ulwimi kunye nokufumanisa indlela entsha yokuphila. Sidinga umntu fun, sithande kwaye esinenkathalo abo yenza wena umdaniso kwaye wavuma (engalunganga) kunye nam, kwaye abo yenza abantwana ndonwabe. Kengoko nje ufuna umntu emsebenzini kuba nathi, sifuna umntu ukuba abe yinxalenye yosapho lwethu, udade okanye nangaphezulu umntakwabo kuba abantwana. Sisebenzisa ujonge ukuze kubekho inkqubela okanye boy abantliziyo s ulwimi isingesi, njengoko siyathemba ukuba bethu ababini abantwana kuza kuba ngokupheleleyo bilingual. Zombini boys kuthetha incredibly okulungileyo isingesi, kodwa ngoku sikulungele isebenza ukugcina ukuphucula izakhono zabo. Sifuna ukuba babafundise isixhosa yi-ukudlala imidlalo kwaye puzzles, kokuya kwi-Park, njalo-njalo. Umyeni wam ndithetha okulungileyo isingesi, ngoko ke akunyanzelekanga ukufunda isi-Italian ukuba wena musa ufuna. Uza kusoloko kufuneka kwiintsuku ezimbini ngaphandle ngeveki (mgqibelo-umhla). Xa ufaka apha, sicela wena ukuze sincede kunye homework, nto ezinzima, nje izinto ngathi hovering, ukuchitha i-dishwasher, sweeping nezinye eqhelekileyo khaya chores. Kengoko unayo nayiphi na imigaqo malunga xa ufika ekhaya kwi-ngokuhlwa, okanye nokuba wena hlala kwaye kuza emva elandelayo mini, kodwa sithanda appreciate ngayo ukuba ukhe waxelela kuthi xa ushiya.
Thina ungathanda ukuba kufumana isidlo sasemini kunye nathi kwaye ukuchitha ixesha kunye nathi ngendlela indlela ukuze sibe ungathanda ukuba uzive ngathi yinxalenye yosapho, kodwa kunjalo oku asikuko ezigunyazisiweyo.
Kufuneka ukukhetha kwabo phezulu ukusuka esikolweni, njl
Siphila ngendlela ezintathu ibali indlu kunye bedrooms upstairs kwaye bathroom. Kufuneka eyakho bedroom nge Hae, i-TV, bookcase, wardrobe kwaye sideboard. Kwi eliphakathi floor kukho abahlala igumbi ukuze kukhokelela the name enye bathroom. Ngomhla wokuqala floor sino omnye living room, bathroom kwaye name. The bathroom emhlabeni floor kanjalo ubani shawari, apho ungasebenzisa ukuba unqwenela. I ariya apho siphila ubizwa ngokuba Piz, hayi kude Treviso. Omfutshane ukuqeqesha ride ukusuka Venice. Kwi-Pisa baninzi iinkwenkwezi kwaye cafeterias, siya kuba kwiposi kwaye supermarkets ngaphakathi ehamba umgama. Ungasebenzisa i-Bicycle kwaye kuya kuba ride ngaphakathi okanye kufuphi umbindi lwesixeko Pisa. Kukho i-Italian ulwimi isifundo kwi-Treviso ekuseni, apho unako kuzimasa kabini ngeveki (ebusika), kwaye siya kuba ndonwabe ukuhlawulela yakho ukuthatha inxaxheba. Wangaphambili AU pair kokuba iingxaki unxibelelwano kunye utitshala ngenxa yokuba yena asikwazanga ukuthetha isingesi, kodwa ngabo bonke ezahlukeneyo kwaye kukunceda kakhulu a zama, ukuba ukhe ubene anomdla.
Pse nuk mund të takohem me një vajzë
ividiyo Dating zephondo esisicwangciso-mibuzo roulette jikelele ehlabathini kuhlangana phezulu kuba omnye-ixesha ividiyo Dating site free Dating site ngaphandle ubhaliso iwebhusayithi ukuya kuhlangana nawe ividiyo incoko girls roulette ividiyo iincoko nge-girls kuba free ngaphandle ubhaliso Chatroulette ze Dating videos